ချစ်သူကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းတွေက်ို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး ထောင်၀င်စာသွားပို့ပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်ကောင်မလေး – Youth Bar
Cele News • Uncategorized • ဗဟုသုတ
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်တစ်ယောက် အကျဉ်းထောင်ထဲ ရောက်နေသည်မှာ တစ်လတိတိပြည့်ခဲ့ပါပြီနော်။ အပြင်မှာ ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်များကလည်း ပိုင်တံခွန်အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားပေးနေကြပါတယ်နော်။
ချစ်သူလေးကလည်း သူ့ကောင်လေး အပြင်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံရှာကာ လုပ်ပေးနေတာပါနော်။
သူကြိုက်တတ်တာလေးတွေကို စားရစေဖို့အတွက် ထောင်ထဲကို မရရအောင် ပို့ပေးနေပါတယ်နော်။ အခုလည်း ပိုင်တံခွန်ကြိုက်တတ်တဲ့ ပုစွန်ကင်၊ လက်ဖက်သုပ်၊ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်၊ အုန်းရည်နဲ့ ဌက်သိုက်တို့ကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးထောင်ထဲရောက်အောင် ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ ချစ်သူကို အမြဲလိုလို သတိရနေကြောင်းကိုလည်း ရေးသားထားပါတယ်နော်။
” ဒီနေ့က သူ့ကိုမတွေ့ ၊ အသံမကြားရတာ တစ်လတိတိနေ့၊ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်း သတိရနေပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမနည်းသွား အော င် motivated အမြဲဖြစ်နေအောင် စိတ်ကိုအရင်ထက်ပို focus လုပ်နိုင်နေပါတယ်။ ပိုအလုပ်ကြိုးစားမယ် လူတွေကို ပိုကူညီမယ် တတ်နိုင်သလောက်လှူမယ် သူ့အတွက် လုပ်ပေးနိုင်တာအားလုံး လုပ်ပေးမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပိုစကားပြောမယ်။ စိတ်ချမ်းသာအောင် အတတ်နိိုင်ဆုံးနေမယ် sometimes you have to get away to come back stronger than ever I won’t give up.I believe we will meet soon “ လို့ ရေးသားထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္တစ္ေယာက္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ေရာက္ေနသည္မွာ တစ္လတိတိျပည့္ခဲ့ပါၿပီေ နာ္။ အျပင္မွာ ရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕မိသားစုဝင္မ်ားကလည္း ပိုင္တံခြန္အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပးေနၾကပါတယ္ေနာ္။
ခ်စ္သူေလးကလည္း သူ႔ေကာင္ေလး အျပင္ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိဖို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံရွာကာ လုပ္ေပးေနတာပါေနာ္။
သူႀကိဳက္တတ္တာေလးေတြကို စားရေစဖို႔အတြက္ ေထာင္ထဲကို မရရေအာင္ ပို႔ေပးေနပါတယ္ေနာ္။ အခုလည္း ပိုင္တံခြန္ ႀကိဳက္တတ္တဲ့ ပုစြန္ကင္၊ လက္ဖက္သုပ္၊ ခရမ္းသီးမီးဖုတ္၊ အုန္းရည္နဲ႔ ဌက္သိုက္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပီးေထာင္ထဲေရာက္ေအာင္ ပို႔ေ ပးခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူကို အၿမဲလိုလို သတိရေနေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားထားပါတယ္ေနာ္။
” ဒီေန႔က သူ႔ကိုမေတြ႕ ၊ အသံမၾကားရတာ တစ္လတိတိေန႔၊ အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတိုင္း သတိရေနေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အားမနည္းသြား ေအာ င္ motivated အၿမဲျဖစ္ေနေအာင္ စိတ္ကိုအရင္ထက္ပို focus လုပ္ႏိုင္ေနပါတယ္။ ပိုအလုပ္ႀကိဳး စားမယ္ လူေတြကို ပိုကူညီမယ္ တတ္ႏိုင္သေလာက္လႉမယ္ သူ႔အတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္တာအားလုံး လုပ္ေပးမယ္။ သူငယ္ခ် င္းေတြနဲ႔ပိုစကားေျပာမယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အတတ္နိိုင္ဆုံးေနမယ္ sometimes you have to get away to come back stronger than ever I won’t give up.I believe we will meet soon “ လို႔ ေရးသားထားပါတယ္ပရိသတ္ႀကီးေရ….
သားလေးရဲ့ အသက် (၂၀)ပြည့်နေ့မှာ အရင်လို အတူတူမရှိရတော့တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့သော သူရဲကောင်း မောင်မင်းမြတ်ပိုင်ရဲ့ အမေ